December 2021 - Khitamyin
မြန်မာပြည်သူများ ဆင်းရဲခြင်း လွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြဆောင်ပါမည်ဟု တရုတ်သံအမတ် ပြော
December 31, 2021 Ko Khit 0
မြန်မာပြည်သူများ ဆင်းရဲခြင်း လွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြဆောင်ပါမည်ဟု တရုတ်သံအမတ် ပြောပြီ.. မြန်မာပြည်သူများ ဆင်းရဲခြင်းက လွတ်ကင်းပြီး ချမ်းသာစေရေးနဲ့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို အားဖြည့် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်သံအမတ် Mr. Chen Hai က ပြောပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ […]
“သာတူညီမျှ” – မြန်မာပြည် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့ လူကြီးတွေအတွက် အတုယူသင့်တဲ့ စံနမူနာ တခု.. ဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့ ဒေသတစ်ခုရှိ ကျောင်းငယ်လေး တစ်ကျောင်းမှာ ဆရာမက ကျောင်းသူတွေကို စာစီစာကုံး ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခု လုပ်ပေးတယ်။ ပြိုင်ပွဲမှာ ထူးချွန်သူဟာ ဖိနပ်လေးတစ်ရံ ရမယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ကလေးတွေကလည်း အားရဝမ်းသာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် […]
ဖရူးဆိုး လူသတ်ပွဲ အပေါ် ကုလ လုံခြုံရေးကောင်စီ ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်း မီဒီယာ များ အားလုံးက ခရစ်စမတ် အကြိုနေ့တွင် ဖရူးဆိုး၌ ပြည်သူများ အား မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုကြီးကို တနှစ်လုံး သတ်ဖြတ်ခဲ့သမျှ တွင် အဆိုးဝါးဆုံး ကျူးလွန်မှုကြီးဟု ကင်ပွန်းတပ်လာ […]
မြန်မာပြည်သူတွေအနေဖြင့် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကို အမြစ်ဖြတ်နိုင်မလား
အဆိုပါ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒက္ကားမြို့ ထုတ် ဒေလီစတား သတင်းစာမှ ဆောင်းပါးရှင် Tasneem Tayeb ၏ “Can Myanmar Unite to Stop the Tatmadaw? အား စထရိတ်တိုင်း သတင်းစာမှ တဆင့် ပြန်လည် ဖေါ်ပြ ခဲ့သည်ကို ကောက်နှုတ်တင်ပြသည်။ […]
အာဏာသိမ်း စစ်တပ်နှင့် ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့များအကြား ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်နေရသော လေးကေ့ကော် ဒေသခံများ နေရပ်သို့ ပြန်လည် နေထိုင်နိုင်ကြောင်း စစ်ကောင်စီက ကြေညာသည်။ စစ်ကောင်စီတပ်သားများ နှင့် ထွေအုပ်ရုံး ဝန်ထမ်းများက ယမန်နေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်တွင် […]
သိန်းထောင်ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့ ရေဆင်အကြောင်း သိကောင်းစရာ ဆင်သမားတစ်​ယောက် ဆင်စီးရင်း ​ချောင်းနိမ့်တစ်ခုကို ဖြတ်ရာတွင် ဒုက္ခလှလှ ​တွေ့​နေသည်။ ဆင်ကိုချွန်းနှင့် ဘယ်လိုဆွဆွ၊ ပါးစပ်မှ​အော်ပြီးဘယ်လိုလှန့်လှန့် ဆင်က ​ချောင်းကိုမဖြတ်၊ ​ချောင်းစပ်တွင်သာ ရပ်၍ တဝူးဝူး​ အော်​နေသည်။ ဘာ​ကြောင့်ပါလိမ့်? မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်တဝိုက်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း သစ်​တောနယ်​မြေ တချို့တဝက်တွင် […]
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ PDFနဲ့ EAO ပူးပေါင်းထားတဲ့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြား တိုက်ပွဲအရှိန်အဟုန်မြင့်မားလာနေချိန်အတွင်း PDF တွေက လက်နက်ခဲယမ်းလိုအပ်ကြောင်း အကျယ်အပျံ့ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ NUG အနေနဲ့ မိမိတို့ PDF တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ကွပ်ကဲမှုပိုမိုကောင်းမွန်ဖို့ လိုအပ်နေပြီး တကယ်လို့သာ လိုအပ်တဲ့လက်နက်အရေအတွက်ကို အပြည့်အဝ မဟုတ်သည့်တိုင် တစုံတရာအတိုင်းအတာအထိ ရရှိလာမယ်ဆိုရင် […]
December 28, 2021 Ko Khit 0
လာမယ့် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်နေ့မှာ တစ်နေ့လျှင် ၂ ဘာသာနှုန်းဖြင့်ကျင်းပတော့မည့် အခြေခံပညာအဆင့် နှစ်ဝက်စာမေးပွဲများအကြောင်း ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာအဆင့်နှစ်ဝက်စာမေးပွဲများကို လာမယ့်ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှစ၍ တစ်နေ့လျှင် ၂ ဘာသာနှုန်းဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်တယ်လို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “ဇန်နဝါရီလ ၅၊ ၆၊ ၇ ရက်မှာစစ်ဖို့စာထွက်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်။ဒီနှစ်ဝက်စာမေးပွဲကို ပေါ့နော်။ […]